Factlọ ọrụ ntanetị infrared - China Infrared Materials Manufacturers, Suppliers
DIEN TECH na-enye ihe dị iche iche nke infrared na njiri mara anya dị mma, na-eguzogide acid-base mbuze na arụmọrụ kemịkal siri ike bụ kristal anya anya dị oke mkpa na IR waveband, gụnyere ZnSe na ZnS. Ọzọkwa nhazi nke ihe ndị a dị ka eserese na teknụzụ.
ZnSe bụ ụdị ihe edo edo na nke transperent mulit-cystal, nha nke ngwongwo kristal bụ ihe dị ka 70um, na-ebunye ya site na 0.6-21um bụ nhọrọ magburu onwe ya maka ọtụtụ ngwa IR gụnyere ike dị elu CO2 laser sistemụ.
ZnS bụ kristal anya dị ezigbo mkpa etinyere na IR. Transmitting nso nke CVD ZnS bụ 8um-14um, elu transmittance, ala absorption, ZnS na multi-ụdịdị dị iche iche larịị site na kpo oku wdg static mgbali technics ka mma transmittance nke Iye na anya nso.
Calcium Fluoride nwere ngwa ngwa IR dị ka CaF2 windo, CaF2 prisms na CaF2 anya m. Kasị dị ọcha akara ule nke Calcium Fluoride (CaF2) chọta ihe bara uru na UV na windo UV Excimer laser. Fluoride nke Calcium (CaF2) dị doped na Europium dị ka gamma-ray scintillator na ike karịa Barium Fluoride.
Silicon bụ mono kristal bụ nke a na-ejikarị eme ihe na ọkara na-adịghị adọrọ adọrọ na mpaghara 1.2μm na mpaghara 6μm IR. A na-eji ya ebe a dị ka ngwa anya maka ngwa mpaghara mpaghara IR.
The Germanium dị ka a mono kristal mbụ na-eji na ọkara eduzi bụ ndị na-abụghị absorptive na 2μm ka 20μm Iye mpaghara. A na-eji ya ebe a dị ka ngwa anya maka ngwa mpaghara mpaghara IR.